Magaca Bond, Eurobond | FXCC Blog
Sep 15 • Faallooyinka Suuqa • 3568 Views Comments Off on Magaca Bond, Eurobond
Madaxa Guddiga Yurub Jose Manuel Barroso wuxuu leeyahay qorshe, waxaana ku taageeray tiro tirooyin heer sare ah oo ah 'qorshe badbaado' oo loogu talagalay dhibaatooyinka deynta Euroland iyo sidoo kale bangiyada waaweyn ee yurubiyanka ah. Qorshuhu waa inuu soo saaro "eurobonds" oo ah qaab hab xun oo loo xakameeyo xanuunka oo dhan iyo wadaagaan culeyska dhammaan toddoba xubnood oo xubin ka ah Midowga Yurub.
Wasiirka Maaliyadda Talyaaniga ayaa ugu yeeray "xalal sare" oo ah dhibaatada deynta ee euro-da. Shirkadaha waaweyn ee maaliyadda, oo ay ka mid yihiin maalgashadayaasha bilyaneeriga ah iyo qiimeeyaha lacagta George Soros, ayaa waxay siiyaan Eurobonds ducadooda iyo taageeradooda. Sidaa darteed waa maxay xayiraadda iyo sababta mujtamaca ka soo horjeeda laga soocay meelo gaar ah? Muxuu Jarmalku si joogta ah uga soo horjeeday mucaarad aan raali laga ahayn oo dhan ee fikradda Eurobonds?
Xalka Eurobond waa mid qurux badan. Qaar ka mid ah dawladaha yurubiyanka ah ayaa ku qanacsan in ay ka sii qaalisan yihiin si ay uga amaahdaan suuqa suuqyada Maadaama ay dhaqaalahoodu istaagaan, oo ay ku dhacaan culeysyo culus oo deyn ah iyo baahida amaahda, qiimaha deynta ayaa noqdey mid dulqaad leh. Greece ayaa amaahday laba sano oo bonds ah marka la eego heerka 25% halka Jarmalku uu kari karay dulsaarkiisa ugu jaban mudo lixdan sano ah. Dhab ahaan tani waxay ka tarjumaysaa mabda'a maaliyadeed ee Jarmalka, si kastaba ha ahaatee, dhibaatooyinka dhismaha ee ku dhex yaal euro ayaa ku dhigay koonfurta yurub markii ay khasaarisay. Xalka eurobond waxaa loogu talagalay dhammaan toddoba iyo toban dowladood oo yurubiyiin ah si ay si wadajir ah u dammaanad qaadaan deymanka kuwa kale, oo ah noocyada canshuurta guud. Marka aad sidaas samaynayso, dowladaha oo dhan way ku amaahdaan isla isla markaana isla qiimahaas.
Horumarinta ugu wayn ee qorshaha Eurobond maaha mid ka yimid wadamada xubnaha ka ah, laakiin saraakiil Shiineys ah oo u muuqda inay ugu dambeyntii ku dhufteen midabkooda midabkiisa. Shiinaha ayaa u muuqata inay diyaar u tahay inay ka iibsato eurobonds ka socda wadamada ku lugta leh xiisadda deynta. Zhang Xiaoqiang, oo ah ku xigeenka madaxa hay'adda ugu weyn ee qorshaynta dhaqaalaha ee dalka, ayaa taageero ka bixiyay Forum Dhaqaalaha Adduunka ee Dalian oo ku yaala tandem iyadoo la kaashanayo taageero ka timid Premier Wen Jiabao horaantii todobaadkii isla hal mar.
Waxaa jira wax ka badan malaha shaki ah in sababaha asalka ah ee diidmada Jarmalka ay u muuqato mid siyaasadeed. Hogaamiyayaasha jarmalku shaki kuma jiro in tiradoodu kor u dhaaftay tirakoobka shisheeye ee toddobaadyadii la soo dhaafay oo si buuxda loo ogaaday in burburkii Euro aanu noqon karin "si haboon" waxa uu noqon lahaa mid khatar ah, gaar ahaan Germany. Sawirada boqolkiiba shan iyo shan boqolkiiba hoos u dhaca ganacsiga iyo dakhliga ayaa lagu daabacay faallooyin badan oo suuqa ka jira. Inkasta oo uu kudhawaaqayo xagjirnimada xagjirnimada xayaysiisyada wargeysyada wargeysyada Jarmalka bedelaadda badbaadinta bondka ma jiraan, ma jiraan muuqaal qorshe B. Sidaa darteed u qorshee baahida loo qabo in lagu iibiyo dadka jarmalka ah ee shaki badan.
Waxaa laga yaabaa inay xoogga saaraan fikradahooda wadajirka ah ee koritaanka shaqo la'aanta iyo xasuusinta jarmalka Jarmalka in haddii qaar ka mid ah wada-hawlgalayaasha yurub ay hoos u dhacaan waxa ay Jarmalku ku filnaan doonaan. Qoraalka dareenka ee dareenka; Talyaaniga, Spain, Greece, Portugal, Irish, (PIIGS oo wadajir ah) oo doonaya 'raacitaan bilaash ah' oo ku yaala dhabarka maaraynta maaliyadda ee Jarmalka iyo qaabdhismeedka dhaqaalaha ee tamarta dhaqaalaha ayaa u baahan in laga hadlo, waxaana uu ku fadhiyaa Merkel Chancellor Merkel si uu u bilaabo wada hadalka iyo sheekada sida ugu dhakhsaha badan suurtagal ah. Ms Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Sarkozy ayaa u muuqda inay midoobeen subaxnimadii saaka iyaga oo ballanqaaday iyo in ay ku qanacsan yihiin in Greece aysan ka tagi doonin Euro.
Bangiga dhexe ee Swiss ayaa dhigtay siciradooda asaasiga eber. Siyaasiyiinta SNB ayaa jaray kharashka ka soo baxa 0.25 boqolkiiba bishii hore halka kor u qaadista dakhliga suuqyada lacageed si ay u caawiyaan daciifinta franciska. Bangiga dhexe ee Swiss ayaa markii ugu dambeysay soo bandhigay 'lacag canshuur' ah oo ku yaal 1978 si uu uga faa'iidaysto guulaha uu ka gaaray shirkadda Deutsche. Inkasta oo aan la sheegin "fur" dibadbaxyada dhowaan ee bangiga dhexe, in ay tagi doonto wixii dherer ah ee lagu hayn karo frank si ay u noqoto 1.20 oo ka soo horjeeda Euro, waxay isku mid tahay. Waxaa laga yaabaa in laga yaabo in la filayo qiimaha sicir-tirka ee saldhigga ah ee Euro-ga wuxuu sameeyay guulo la taaban karo oo ka soo horjeedka labada fanaan ee labadii kulan ee ugu dambeeyay.
Suuqyada Aasiya (badiyaa) waxay sameeyeen faa'iido wanaagsan xaga ganacsiga subaxnimada / horraanta, Nikkei waxay xireen 1.76% iyo Hang Seng waxay xireen 0.71%. CSI ayaa xidhay 0.15%. Qaybaha yurubiyanka ah waxay sameeyeen faa'iidooyin badan oo ganacsi subax ah, STOXX waxay leedahay heer sare oo 2.12%, CAC 2.01%, DAX 2.13%. qalabka waa 1.68%. Cawska Brent waa $ 150 oo ah foosto, dahabkuna wuxuu hoos u dhacayaa $ 5. Mustaqbalka SPX maalin walba wuxuu soo jeedinayaa furitaanka wareega 0.5% ilaa. Suuqyada sicirku waxay ahaayeen kuwo isku dhafan, Aussie Dollar oo laga dhigo mid ka soo horjeeda mid aan habooneyn oo habeenkii iyo subixii hore. Soo jiidashada suuqyada Maraykanka waxaa jira rukun xog ah oo la daabacayo gelinka dambe kaas oo saameyn kara xasaasiyad.
13: 30 US - CPI Aug
13: 30 US - Xisaabaadka 2Q
13: 30 US - Heerka Wax-soo-saarka Boqortooyada Boqortooyada Midoobey Sept.
13: 30 US - Codsiyada shaqo la'aanta bilawga ah iyo sii socota
14: 15 US - Wax soosaarka Warshadaha August
14: 15 US - Awoodda Isticmaalka Awoodda Aug
15: 00 US - Philly Fed Sept
Tirakoobka CPI waxaa la saadaalinayaa inuu bilaha xasilloon bisha bilaha ah, saadaalinta waxaa lagu xisaabinayaa tirakoobka sanadlaha ah si aan loo dhigin 3.6%.
Lambarrada codsiyada shaqada ee bilawga iyo joogtada ahi waxay noqon doonaan kuwo xiiso leh. Sahaminta Bloomberg ayaa saadaalisay tirada Sheegashada Ganacsi la'aanta Bilowga ah ee 411K, tani waxay is barbardhigeysaa tirada hore ee 414K. Sahan la mid ah ayaa saadaalisay 3710K in la sii wado sheegashada sii socota, marka la barbardhigo shaxdii hore ee 3717K.
Philly Fed ayaa loo tixgeliyaa 'madax-korodh' horraanteeda sida warbixinnada kale ee soo baxday ay muujin karaan, sahankan ayaa la sameeyay tan iyo 1968 waxaana ka kooban dhowr su'aalood sida shaqada, saacadaha shaqada, amarro, suuqyo iyo qiimo. Baadhitaanka Bloomberg ee dhaqaaleyahannada ayaa saadaaliyay dhexdhexaadinta -15. Bishii la soo dhaafay waxay muujineysaa in -30.7.
dhibaatooyinka yurubfxccfaallooyinka suuqa
« Duulimaad lacageed iyo Dareemidda Gawaarida Dahabka Giriiggu waa Ereyga sida Halista Dhibaatooyinka Dunida ee Kordhinta DEFCON 4 »
Tilmaamayaasha Sare ee Forex iyo Waxa ay u jeedaan